Ngiphakamisa ukubonga ngokukhanyisa nokukhanyiselwa nguNkulunkulu okwangenza ngakwazi ukubona lezi zinto, ngabe emva kwalokho sengiqala ukugxila ekwenzeni nasekungeneni kulokhu. Ngelinye ilanga, ngafunda indima yamazwi kaNkulunkulu: “Ukubaluleka nokungabaluleki kwalo msebenzi kuncike ezidingweni zabantu, nokuthi sikhohlakele ngezinga elingakanani isintu, nesimo sokungalaleli kukaSathane nokuphazamisa kwaso umsebenzi. Lowo ofanele owulungele umsebenzi uphakanyiswe ngokwesimo somsebenzi owenziwa yisisebenzi, nokubaluleka komsebenzi. Uma kuziwa ekubalulekeni kwalo msebenzi, ekutheni iyiphi indlela okufanele isetshenziswe—umsebenzi owenziwa ngokuqondile uMoya kaNkulunkulu, noma owenziwa uNkulunkulu osesimweni somuntu, noma owenziwa umuntu—umsebenzi oyoqedwa kuqala owenziwa umuntu, futhi, ngenxa yohlobo lomsebenzi, kanye nomsebenzi kaMoya okanye nomsebenzi wenyama, ekugcineni kuyonqunywa ukuthi umsebenzi owenziwa inyama umzuzisa kangcono yini umuntu kunomsebenzi owenziwa uMoya, futhi unezinzuzo eziningi. Lona umcabango uNkulunkulu ngaleso sikhathi anquma ngawo ukuthi umsebenzi wenziwa uMoya noma inyama” (“Isintu Esikhohlakele Siyidinga Ngokwengeziwe Insindiso KaNkulunkulu Osesimweni Somuntu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Uma ngizama ukuqonda le ndima ngokuqikelela, ngazizwa sengathi ngithole umcebo omkhulu. Amazwi kaNkulunkulu akhombisa ukuqhubeka kokucabanga kukaNkulunkulu ngalesiya sikhathi, ukucabanga ukuthi kusetshenziswe yiphi indlela yomsebenzi ezinsukwini zokugcina. Ngesikhathi sokucabanga Kwakhe, into yokuqala uNkulunkulu aninga ngayo kwaba ukuthi iyiphi indlela azoyisebenzisa engahlomulisa isintu kakhulu kulo msebenzi, ukuthi kungatholakala kanjani kangcono umphumela wokusindiswa komuntu kanye nokuthi kwenziweni ukuze kwenziwe uSathane amukele ukunqotshwa, ngaleyo ndlela kushabalaliswe uSathane bese kulethwa abantu ababekade belimele ngokujulile ensindisweni ephelele. Ngalesi sikhathi sonkana nenqubo yokucabanga, uNkulunkulu wayelokhu eqhakambisa izintshisekelo nokuphepha komuntu hhayi neze Ezakhe. Kusobala ukuthi uNkulunkulu wayazi ngokuba Kwakhe senyameni wayezobhekana nobunzima obukhulu, kodwa lokhu akakushayanga ndiva uma ecabanga ngokusindisa isintu. Kunalokho, waqhubeka nokukhetha, ngokuncike ezidingweni zesintu nesimo sokungcola kwesintu, indlela kaNkulunkulu yokuba senyameni ukuze enze umsebenzi wezinsuku zokugcina. Uzibeka engcupheni enkulu ukuze angene shi emphandwini wengonyama, ubhekana nokushushiswa okunamandla nokuzingelwa ngudrako omkhulu obomvu, abekezelele ukuhlukunyezwa nokuhlambalazwa yizinkolo namabandla ahlukahlukene, futhi abekezele ukuphikiswa, ukungalalelwa kanye nokungaqondwa kwalabo bethu abalandelayo. Amanxeba nokuhlaselwa okubhekiswe enhliziyweni kaNkulunkulu kanjalo nokuhlaziswa akubekezelelayo uNkulunkulu empeleni yizinto okungekho muntu onokuziqonda. Yonke into uNkulunkulu ayishoyo nayambulayo iyikhona konke ayikhona empilweni: Ukuzinikela Kwakhe okungenabugovu esintwini kanye nokusikhokhela Kwakhe icala laso. Ubukhulu bukaNkulunkulu nokungabi nabugovu Kwakhe kwambulwa ngokwemvelo emsebenzini Wakhe kanye nasemushweni ngamunye Wakhe, futhi lokhu kuyingxenye yomusa kaNkulunkulu omkhulu nothando oluzinikele. Uthando lukaNkulunkulu ngomuntu akuwona nje amazwi angasho lutho, kodwa yinani langokoqobo alikhokhayo. Ngaleso sikhathi, ngathola umuzwa ocace bha okuthi uNkulunkulu ngempela mkhulu futhi uyathandeka kakhulu! Ngakho, yize noma ngangiwafundile la mazwi kaNkulunkulu ngaphambilini, ngangingakaze ngiqonde isendlalelo kwamazwi uKristu ayewakhulumile noma konke lokho ayekwambula, noma-ke ngiqonde uthando lukaKristu ngomuntu. Kumanje kuphela lapho ngithole ukuqonda kweqiniso la mazwi kaNkulunkulu: “Umusho ngamunye engiwukhulumile umumethe isimo sikaNkulunkulu.”
Okwedlule: Kunenjabulo Enkulu Ekwethembekeni
Okulandelayo: Angikulungele Ukubona UKristu
UGan’en Edolobheni LaseHefei, Esifundazweni Sase-Anhui Empilweni yami, yilokhu ngaphila ngamagama athi, “Umuntu akufanele abe nenhliziyo...